ယခုကာလတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ပညာသင်ကြားရန် ရည်ရွယ်ထားသော ကျောင်းသား/သူများ ပ
Education: choose the best, achieve success.
- Study in Australia, UK, US, Singapore, New Zealand
**ယခုကာလတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ပညာသင်ကြားရန် ရည်ရွယ်ထားသော ကျောင်းသား/သူများ ပညာသွားရောက်သင်ကြားရန် ဆိုင်းငံ့ထားသင့်ပါသလား?**
--► သြစတြေးလျနိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတကာ သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသူများသည် ယခုကာလတွင် ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားတွင် တွေ့ကြုံ ခံစားနေရသော COVID-19 ကြောင့် ပညာသင်ကြားခြင်း၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် အခြားသော ကဏ္ဍများတွင် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းများ ရှိနေပါသည်။
--► သို့သော်လည်း ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ကြီးမားသော ပညာရေးအိမ်မက်များအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားခြင်းများကို ဆိုင်းငံ့ထားစရာမလိုအပ်ပဲ ကျောင်းသားများ မိမိနေအိမ်မှတဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် EDULINK မှ ကိစ္စအ၀၀ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိနေပါသည်။
--►ထို့အတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များသည် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးလမ်းကြောင်း အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်Online Class Teaching and Learning များကို အဆင့်မြင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြင့် စနစ်တကျ သင်ယူနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
--► နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများသည် စာသင်ခန်းသင်ကြားရေးကဲ့သို့ စနစ်ကျသော သင်ကြားရေးစနစ်၊ အမေးအဖြေများ ၊ Assignment များနှင့် Exam များကို online စနစ်မှ တဆင့် ရရှိနိုင်သည့်အတွက် ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအာမခံကြေး ပေးသွင်းခြင်း၊ စသည့်များကိုလည်း ယခုကာလအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပေ။
--►COVID-19 နှင့် ပက်သက်၍ အခြေအနေများ ငြိမ်သက်ရှင်းလင်းသွားလျှင် ကျောင်းသားများသည် Online သင်ကြားရေးကို ရပ်နား၍ ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။
**Online သင်ကြားရေး စနစ်ကို မသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားများ ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း ?**
--► ကျောင်းသားများသည် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းဝင်ခွင့် ရထားပြီးသော်လည်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ခရီးသွားလာမှု အဆင်မပြေခြင်း၊ Online မှ တဆင့် သင်ယူရန် အခက်အခဲရှိထားသူများကိုလည်း EDULINK သည် ကျောင်းဖွင့်ကာလ ( Intake ) ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းများကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
--► ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရန် အစီအစဉ် ရှိထားသူများသည်လည်း ကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားခြင်းများကို EDULINK သို့ ဖုန်းဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ၊ Email ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ၊ online မှ တဆင့် မေးမြန်းလို၍ဖြစ်စေ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
--► Online မှ တဆင့် အသေးစိတ် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသူများ Zoom Application Download လုပ်ပေးထားရန် EDULINK မှ အကြုံပြုပါသည်။
(Zoom Application Download ရယူရန် - [ Zoom.us Link ]
--► Zoom မှတစ်ဆင့်Face to FaceဆွေးနွေးလိုသူများEDULINK မှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများ၏ Zoom ID ရယူရန်အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း၊ (သို့မဟုတ်)
studyabroad@edulinkaustralia.com သို့ ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
--► Appointment ယူဆောင်ပြီးနေအိမ်မှတဆင့် စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ မေးမြန်းဆွေးနွေး၍ ကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် အတူScholarship ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။
Contact us:☎ 09425765090 , 09252569038
09764862080, 09774 855 591
Email – studyabroad@edulinkaustralia.com
Address 04-001/004/006/007 Junction Square, Pyay Road, Kamayut Township,Yangon, Myanmar
--► ထို့အတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များသည် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးလမ်းကြောင်း အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်Online Class Teaching and Learning များကို အဆင့်မြင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြင့် စနစ်တကျ သင်ယူနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
--► COVID-19 နှင့် ပက်သက်၍ အခြေအနေများ ငြိမ်သက်ရှင်းလင်းသွားလျှင် ကျောင်းသားများသည် Online သင်ကြားရေးကို ရပ်နား၍ ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။
--►Online မှ တဆင့် အသေးစိတ် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသူများ Zoom Application Download လုပ်ပေးထားရန် EDULINK မှ အကြုံပြုပါသည်။